सी डिभिजन छनोटका नाममा गरिब क्लबहरूमाथि एन्फाको 'ब्रह्मलुट' | सबै खेल
○ निर्वान झापाली
‘विगत लामो समयदेखि कोभिड-१९ का कारण हामीले खेलकुद खेल्न र खेलाउन पाएका थिएनौं। आउँदो नयाँ वर्षमा हामीले फेरि पहिलेझैं गेम राख्ने कोसिस गर्नेछौं, त्यसका लागि हजुरहरूको सहयोग चाहिन्छ। जो जहाँबाट भएपनि हामीलाई थोरै भएपनि सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौं ।’
गत १७ चैतमा सुर्खेतको मेहेलकुना फुटबल क्लबले आफ्नो फेसबुकमा राखेको पोस्ट हो यो।
लामो समयदेखि विश्व नै कोरोना महामारीले थलिएको थियो। त्यसबेलासम्म स्थिति धेरै हदसम्म सहज हुँदै गएको भए पनि नेपालको खेलकुद क्षेत्र भने ठप्प प्रायः नै थियो। त्यो बेला मोफसलको एउटा सानो क्लबले फुटबलप्रतिको प्यासनका कारण प्रतियोगिताका लागि सहयोग जुटाउँदै थियो।
त्यसको लगभग ३ महिनापछि असार ३१ गते एन्फाले सी डिभिजन लिग छनोटको सूचना निकाल्यो। डिभिजन फुटबल नखेलेका देशभरका गैरव्यावसायिक क्लबले ३० हजार रुपैयाँ दर्ता शुल्क तिरेर सहभागी हुन पाउने शर्त एन्फाको थियो।
सी डिभिजनमा छनोट हुन टिम दर्ता खुला भएको खबर मेहेलकुना क्लबले पनि पायो। तर, सुर्खेतको त्यो क्लब तत्कालै टिम दर्ता गरिहाल्ने अवस्थामा थिएन । मेहलकुना क्लबलाई २०–२५ जना खेलाडी, एएफसी सी लाइसेन्सप्राप्त प्रशिक्षक र केही अफिसियलसहित काठमाडौं गएर प्रतियोगिता खेल्न ठूलै खर्च लाग्थ्यो।
मेहलकुनालाई छनोट खेल्ने चाहना थियो, तर सँगै आर्थिक संकट पनि थिए। १९ साउनमा मेहेलकुनाले सहयोगको अपेक्षासहित फेसबुकमा एउटा पोस्ट लेख्यो–
‘अवसर त आयो, तर आर्थिक कमजोरीका कारण हामीले यो अवसर गुमाउनुपर्ने भो। अझै समय छ, यदी कसैले सहयोग गर्नुभयो भने यो अवसरले हाम्रा खेलाडी साथीहरूलाई अगाडी बढ्ने मौका मिल्ने छ।’
सुर्खेतको यो क्लबसँग पैसाको अभाव थियो, प्यासनको होइन।
एन्फाको सूचना मेहेलकुनासहित देशभरका धेरै सानाठूला क्लब र समूहहरूले देखे। झापाको बिर्तामोडस्थित झापा एफसीका पदाधिकारीहरूले पनि देखे। उनीहरूलाई पनि यो राम्रो अवसर हो भन्ने लाग्यो। तर, समस्या दर्ता शुल्क कै थियो।
एन्फाले सी डिभिजन लिग छनोट प्रतियोगिता मोफसलका क्लबका लागि अवसर हो भन्ने गरेको थियो। तर, व्यवहारमा भने यो मोफसलका क्लबका लागि होइन, एन्फाका लागि सबैभन्दा ठूलो अवसरका रुपमा देखियो। किनकि टिम दर्तापछि झन् चर्को थियो खेलाडी दर्ता शुल्क।
छनोटमा सहभागी हुन कति खर्च लाग्छ?
एन्फाले जारी गरेको सहीद स्मारक सी डिभिजन लिग छनोट प्रतियोगिता नियमावली २०७८ को नियम (६) अनुसार प्रतियोगितामा सहभागी हुने टिम/क्लबले ३० हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेर टिम दर्ता गर्नुपर्छ।
दर्ता भएका टिमले न्यूनतम १८ देखि बढीमा २३ जना खेलाडी र एक–एक जना प्रशिक्षक र म्यानेजर अनिवार्य दर्ता गराउनुपर्ने थियो। थप ५ जना अफिसियल पनि दर्ता गराउन पाउने नियमावलीमा उल्लेख छ। तर, यी हरेक व्यक्तिको दर्ता शुल्क प्रतिव्यक्ति एक हजार तिर्नुपर्छ।
अर्थात्, न्यूनतम कोटा पुर्‍याउने हिसाबमा मात्र दर्ता गर्दा पनि १८ जना खेलाडी, प्रशिक्षक र म्यानेजर गरी २० जनाको थप २० हजार दर्ता शुल्क एन्फालाई बुझाउनुपर्ने थियो। सी डिभिजन छनोटमा दर्ता हुन एउटा क्लबले शुल्कमात्र न्यूनतम ५० हजार रुपैयाँ एन्फालाई तिर्नुपर्छ।
यसबाहेक खेलाडीको बीमा पनि अनिवार्य गरिएको छ। फुटबल शक्ति प्रयोग हुने फिजिकल गेम भएकाले भवितव्य परिआउने दुर्घटनालाई मध्यनजर गर्दै बीमा अत्यावश्यक हुन्छ। तर, खेलाडीको बीमा कति रकम बराबरको गर्ने भनेर एन्फासँग गाइडलाइन्स नै थिएन।
सी डिभिजन छनोटमा सहभागी अधिकांश क्लबले बीमा रकमका बारेमा जिज्ञासा राख्दा एन्फा प्रतिनिधिले ‘मिलाएर गर्नुस् न, एक लाखजतिको गरे हुन्छ’ भन्ने जवाफ पाएको बताएका छन्।
दर्ता शुल्कबाटै ४० लाखभन्दा बढी संकलन
एन्फाले सी डिभिजन छनोटका लागि दर्ता शुल्कबाट मात्रै ४० लाख बढी रकम संकलन गरेको छ। व्यावसायिक फुटबल खेल्न सुरु नगरेका, स्थानीयको सहयोग र गोजीको पैसा हालेर चलेका क्लबबाट एन्फाले यत्रो पैसा उठाएको हो। सी डिभिजन छनोट खेल्ने कुनैपनि क्लब आर्थिक रुपमा सबल छैनन्।
गाउँटोलमा स्थानीय स्तरबाट केबल फुटलबप्रतिको रुची र मोहबाट प्रेरित भएर खेल्न सुरु गरेका टिमहरू सी डिभिजन छनोटमा सहभागी भएका हुन्। मोफसलको ग्रामीण भेगबाट आएका क्लबमात्र होइन काठमाडौंकै क्लबको आर्थिक अवस्था पनि सुदृढ छैन।
एन्फाले टिम दर्ता शुल्क ३० हजार र खेलाडी दर्ता शुल्कवापत न्यूनतम २० हजार रुपैयाँ लिएको छ। न्यूनतम १८ खेलाडी दर्ता गर्नुपर्ने नियम रहेकोमा अधिकतम २३ जनासम्म खेलाडी दर्ता गर्न पाइन्छ। खेलाडी, प्रशिक्षक र अफिसियल गरी औसतमा २५ जना सदस्य दर्ता गर्ने क्लब धेरै छन्।
एउटा क्लबबाट न्यूनतम ५० हजार हिसाब गर्दा दर्तावापतको रकम ३९ लाख हुन्छ भने ५५ हजारको दरमा ४२ लाख ९० हजार हुन आउँछ। अर्थात्, एन्फाले औसतमा न्यूनतम पनि ४० लाख दर्ता शुल्कवापत संकलन गरेको छ।
सहयोग र सहुलियत शुन्य
लाखमा दर्ता शुल्क लिएको एन्फाले सहभागी टिमलाई सहुलियत भने केही पनि दिएको छैन। प्रतियोगिताका लागि मोफसल वा राजधानीका कुनै पनि टिमले एन्फाका तर्फबाट कुनैपनि किसिमको सहयोग पाएका छैनन्।
सबै क्लबहरूले खाने तथा बस्ने सबै व्यवस्था आफै गर्नुपर्छ। काठमाडौंमा बस्न तथा खानका लागि यहीँका स्थानीय क्लबलाई धेरै समस्या नपरे पनि मोफसलका टिमका लागि यो निकै ठूलो व्ययभार हो। खेलाडी, प्रशिक्षक तथा पदाधिकारीसहित २५–३० जनालाई खान, बस्न र प्रशिक्षण गर्न दैनिक न्यूनतम पनि २५ हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको सहभागी टिमले बताएका छन्।
छनोटको समूह ‘एल’मा रहेको झापा एफसी प्रतियोगिता अघि हेटौंडामा बन्द प्रशिक्षण गरिरहेको छ। बन्द प्रशिक्षणकै क्रममा पनि दैनिक २५ हजारको हाराहारीमा खर्च भइरहेको क्लबका पदाधिकारीहरू बताउँछन्। प्रतियोगिताका लागि काठमाडौं आएपछि हुने खर्च जुटाउनका लागि झापा एफसीका पदाधिकारीहरू अहिले दौडधुपमा छन्। र, यो झापा एफसीको मात्र कथा होइन। मोफसलबाट आएका सबै टिमको समस्या यही छ।
रुपन्देहीको बुद्धभूमि, रामेछापको लिखु भुजी, उयदयपुरको साथी समूह, बाजुराको रानीवन स्पोर्ट्स क्लबलगायत अन्य धेरै। यी क्लबहरू भौगोलिकताका आधारमा फरक होलान्, तर सबैको संघर्ष एउटै छ।
अन्य प्रतियोगिता भर्सेस सी डिभिजन छनोट
एन्फाले लिग तथा नकआउट प्रतियोगिता आयोजना गर्ने गरेको छ। एन्फाको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता भनेको ए डिभिजन लिग हो। पछिल्लो संस्करणको ए डिजिभन नियमावली अनुसार सहभागी क्लबले १५ हजार दर्ता शुल्क बुझाएका थिए। यो सी डिभिजन छनोटको भन्दा आधा कम हो।
ए डिभिजनमा एन्फाले फुटबलमात्र होइन फुटसल प्रतियोगिता पनि आयोजना गर्दछ। एन्फाको आधिकारिक वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार त्यसको टिम दर्ता शुल्क १० हजार मात्र छ। अर्थात्, सी डिभिजन छनोटभन्दा तीन गुणा कम।
साथै, एन्फाले ए डिभिजन, बी डिभिजन र सी डिभिजन खेल्ने क्लबहरूलाई तयारी खर्च वापत निश्चित रकम पनि दिने गरेको छ। ए डिभिजन लिग खेल्ने क्लबले तयारी खर्च वापत २० लाख पाउँछन् भने बी डिभिजन खेल्न क्बलले ९ लाख र सी डिभिजन खेल्ने क्लबले ७ लाख रुपैयाँ पाउँछन्।
एन्फाले जसरी डिभिजन लिग खेल्ने टिमलाई न्यूनतम दर्ता शुल्कमा उल्टै तयारी खर्च दिएर प्रतियोगिता आयोजना गर्ने गरेको छ, छनोट खेल्ने क्लबलाई पनि तयारी खर्च उपलब्ध गराउनु पर्थ्यो।
करोडका प्रायोजक भएका शीर्ष क्लबलाई तयारी खर्चको आवश्यकता देख्ने एन्फाले गाउँ–टोलबाट हजार रुपैयाँ उठाएर फुटबल खेल्न आएका क्लबलाई पनि सहयोग आवश्यक पर्छ भनेर नसोच्नु एन्फा नेतृत्वको चरम अक्षमता हो।
नेपाललगायतका देशमा फुटबलको विकास र स्तरवृद्धिका लागि फिफाले हरेक वर्ष बजेट बढाइरहेको छ। एन्फाले पनि त्यसका लागि वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ पाइरहेको छ। सन् २०२० को अगस्टमा मात्रै फिफाले एन्फालाई ५ लाख अमेरिकी डलर अर्थात्, ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग गरेको थियो।
फिफाबाट करोडमा सहयोग पाएको एन्फा ग्रामीणस्तरका गैर–व्यावसायिक क्लबहरूबाट पनि लाखौं संकलन गरिरहेको छ। रकम संकलन गरेर उसले ति क्लबहरूलाई कुनै सहुलियत दिइरहेको छैन। जति खन्याए पनि नभरिने एन्फाको यो ‘चुहिने डोको’ प्रवृत्तिका विषयमा एन्फाले छिट्टै सुधार ल्याउनेछ भन्ने आशा छ।
कसरी सम्भव भयो ग्रामीण क्लबहरूको सहभागीता?
दर्ता शुल्क महंगो भएको चर्चा चलिरहँदा क्लबहरू कसरी सी डिभिजन छनोटमा सहभागी भए भन्ने प्रश्न उठ्नु सामान्य हो। यसको उत्तर खोज्न टाढा जानु पर्दैन, सी डिभिजन छनोटमा सहभागी क्लबको फेसबुक हेरे पुग्छ।
स्थानीयवासी, स्थानीय व्यापारी, विदेशमा रहेका जिल्लाबासीलगायत धेरैले ५ हजार, १० हजार तथा इच्छा र गच्छे अनुसार सहयोग गरेर फुटबल खेल्न काठमाडौं पठाएका छन्, उनीहरूलाई। क्लबका फेसबुक वालमा सहयोगीहरूलाई धन्यवाद दिएका पोस्टहरू बग्रेल्ती भेटिन्छन्।
मेहेलकुनाको सी डिभिजन छनोट खेल्ने ‘सपना’ पूरा गर्न पनि धेरैले सहयोग गरेका छन्। तर, मेहेलकुनाका लागि यसपटकको सहभागीता उसले सोचेजस्तो ‘अवसर’ बन्न भने सकेन। समूह चरणबाटै पराजित हुँदै टिम सुर्खेत फर्किसकेको छ।
‘हार होइन सिकाइ हो। अर्कोपटक योभन्दा अझै मेहनत गर्नेछौं,’ मेहेलकुनाले बाहिरिएपछि फेसबुकमा लेखेको छ। लाखौं खर्च गरेर काठमाडौं आएर फुटबल खेल्दा एन्फाबाट एक रत्ति सहयोग नपाउँदा पनि मेहेलकुना फेरि अर्को वर्ष छनोट खेल्ने अठोट गरिरहेको छ।
फुटबलप्रति कति जबरजस्त प्यासन!
हारेर पनि हार स्वीकार नगरेका धेरै मेहेलकुनाहरू छन्– सी डिभिजन छनोटमा। यी सबै क्लबहरू अर्कोपटक फेरि ५–१० हजार उठाएर आउनेछन्, एन्फालले फेरि लाखौं संकलन गर्नेछ। ५–१० हजार सहयोग गर्नेले फेसबुकमा वर्षैपिच्छे धन्यवाद खानेछन्।
कास… त्यसमध्ये एउटा धन्यवाद एन्फाले गरेको सहयोगका लागि हुनेगरी एन्फा नेतृत्वले काम गरेको हुन्थ्यो त सायद नेपाली फुटबलको मुहार अहिले बेग्लै हुन्थ्यो। तर, एन्फा अहिले ५–१० हजार सहयोग बटुलेर आएका क्लबबाट उठाएको लाखौं शुल्क गन्न व्यस्त छ, त्यसबाट फुर्सद भएपछि सहयोग गर्ला सायद!
Tags: ANFA, C Division Qualifiers
पोर्चुगिज टिम छाड्दै युनाइटेड फर्किए रोनाल्डो